June 10th Press release : Xisbiga UCID Oo Shaaca Ka Qaaday Inay Ololihii Berito Ay Ku Bedeleen Cibaado Iyo Alle Bari | Somaliland247's Blog
June 10th Press release : Xisbiga UCID Oo Shaaca Ka Qaaday Inay Ololihii Berito Ay Ku Bedeleen Cibaado Iyo Alle Bari
Filed under: NEWS,SOMALILAND ELECTION — somaliland247 @ 12:04 pm
Hargeysa :- Gudoomiyaha ololaha doorashada ee xisbiga UCID Saleebaan Daahir, ayaa daboolka ka qaaday in xisbiga UCID go’aan ku gaadhay in ololihii doorashada ee berrito uu hakinayo, isla markaana waxa uu sheegay inay sidaas u sameeyeen iyaga oo tix-gelinaya maalinta khayrka badan ee Jimcaha.
Gudoomiyuhu waxa uu sidan ku sheegay shirjaraa’id oo uu maanta ku qabtay magaalada Hargeysa, halkaas oo uu faahfaahin kaga bixiyey sababaha kala gedisan ee ay go’aankaas u qaateen. Waxaana uu hadalkiisa ku bilaabay oo uu yidhi “Waxaan halkan idiinka sheegayaa in maalinta berrito ah uu ku buuxo maalintii saddexaad ee xisbiga UCID. Maadaama oo uu ku soo beegmay maalin jicme ah oo muhiim u ah diinta Islaamka iyo dad-kaba, taasi waxa ay keentay in xisbigu go’aan ku gaadhay inaanu yareeyo sawaxanka iyo qaylada, si ay dadku jaanis ugu helaan inay ilahay u cibaadaystaan, oo ay weliba ducada ku daraan sidii ilaahay inooga kaxayn lahaa nidaamkan dawladeed ee waddanka baabiiyay. Sidaas awgeed ayaanu go’aaminay inaanu joojino bannaan-bixii berrito la samayn lahaa.” Waxa uu intaas raaciyey oo uu yidhi “Labadii maalmood ee hore si wanaagsan ayuu bannaan-bixii ololaha doorashadu noogu dhacay. Waxa maanta aan shaki ku jirin in xisbiga UCID xagga hore kaga jiro olaha doorashada, waxaa libintaas suurta-geliyey taageerashaa xisbiga UCID, meel kasta oo ay Gobolada dalka ka joogaan-na waxa aan u soo jeedinayaa mahad-celin ballaadhan oo la xidhiidha diyaargarawgii xoogaana iyo isu-soo-baxyadii wax-ku-oolka ahaa ee ay ku muujinayeen taageerada wax-ku-oolka ah ee ay u hayaan xisbiga UCID.” Gudoomiyaha ololaha doorashada ee xisbiga ee xisbiga UCID waxa uu hadalkiisa ku soo af-meeray “Meel kasta oo aynu joogno, berrito waxa aynu isku ognay inay ilaahay u cibaadaysano oo aynu ilaahay barino. Taas oo suurtagal nala noqon wayday inaynu khayriyada isugu soo baxno, halkaas uu inagaga lumo waajibaadkii ilaahay. Waxa kale oo muhiim nala noqotay Sidaas darteed, si fiican oo habsi ah isaga cibaadaysta oo isaga nasta.”